भारतमा कोरोनाविरुद्वको खोप लगाउन सुरु नेपालमा कहिले ? - Candles Khabar
गृहपृष्ठ भारतमा कोरोनाविरुद्वको खोप लगाउन सुरु नेपालमा कहिले ?
भारतमा कोरोनाविरुद्वको खोप लगाउन सुरु नेपालमा कहिले ?
भारतमा कोरोनाविरुद्वको खोप लगाउन शनिबारदेखि सुरु गरिएको छ ।
भिडियो सम्मेलनमार्फत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खोप अभियानको उद्घाटन गरेका हुन्। यस अभियानलाई विश्वकै सवैभन्दा ठूलो खोप अभियान भनिएको छ। अभियानअन्तर्गत सवैभन्दा पहिला कोरोनाविरुद्धको लडाईमा अग्रपक्तिमा खटिएकाहरुलाई खोप लगाउने मापदण्ड बनाइएको छ। अग्रपंक्तिका सेवाप्रदायकसहित पहिलो चरणमा झण्डै तीन करोड मानिसलाई खोप लगाउने भारतीय सरकारको तयारी छ। खोप लगाउनका लागि देशभरी तीन हजार ६ ठाउँमा खोप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको र ती सवै भर्चुअल माध्यमबाट एक अर्कामा सम्पर्कमा रहने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। शनिबार पहिलो दिन हरेक खोप केन्द्रमा सय जनाको दरले खोप लगाउन सक्ने जनाइएको छ । खोपका लागि एकिकृत बालविकास सेवाका कर्मचारीसहित सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सवैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। दैनिक विहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खोप सेवा उपलब्ध गराइने केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्ष बर्धनले जानकारी दिए। उनले कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु हुनुलाई कोरोनाको अन्त्य नै सुरु भएको रुपमा लिएका छन्।
अर्को चरणमा ५० बर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई मात्रै खोप दिइने मापदण्ड बनाइएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन्। बृद्धबृद्धाहरु कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमणको उच्च जोखिम हुने र सङ्क्रमित भइसकेपछि जित्न पनि गाह्रो हुने भएकाले उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनीहरुले जनाएका छन ्। उमेरले ५० बर्षभन्दा कम भएकाहरु पनि गम्भीर अवस्थाका विरामी छन् भने पनि उनीहरुलाई खोप लगाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
खोप अभियानको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना महामारी विरुद्धको सङक्रमण भारतीयहरु एकताबद्ध भएर लडेको बताउँदै खोपका लागि पनि भारतले कडा परिश्रम गरिरहेको बताए ।
प्रकाशित समय १८:४४ बजे
पछिल्लाे - ७९ वटै स्थानीय तहमा कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन
अघिल्लाे - पीएम कप क्रिकेट : प्रदेश १ लाई हराउँदै एपीएफको विजयी सुरुवात
जर्जियाका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा घोषणा
बाइडेनलाई कोरोनाबाट बचाउन ह्वाइट हाउसका ५० प्रतिशत कर्मचारी घरबाटै काम गर्दै